Забур 13 CARS - Nnwom 13 ASCB
1Ao, Awurade, ɛnkɔsi da bɛn? Wo werɛ bɛfiri me afebɔɔ anaa?
Ɛnkɔsi da bɛn na wode wʼanim bɛhinta me?
2Ɛnkɔsi da bɛn na mene mʼadwendwene bɛdi apereapereɛ
na awerɛhoɔ ahyɛ mʼakoma mu daa?
Mʼatamfoɔ nni me so nkonim nkɔsi da bɛn?
3Te wʼani hwɛ me na bua me, Ao, Awurade, me Onyankopɔn.
Ma mʼani so nyɛ hann, na manna owuo nna.
4Me ɔtamfoɔ bɛka sɛ, “Madi ne so nkonim.”
Na mʼahohiahiafoɔ bɛdi ahurisie ɛberɛ a mahwe ase.
mʼakoma di ahurisie wɔ wo nkwagyeɛ mu.
ɛfiri sɛ ɔne me adi no yie.
ASCB : Nnwom 13